USS Zimbabwe (Constitution class) information - The Full Wiki
More info on USS Zimbabwe (Constitution class)
USS Zimbabwe (Constitution class): Misc
For other starships of the same name, see USS Zimbabwe.
The USS Zimbabwe was a Constitution-class Federation starship in service in the 23rd century, and was commissioned on stardate 5621.3.
By the 2260s, the Zimbabwe was under the command of Captain Ulysses Montaya. During this time, her non-classified assignments included the transportation of diplomats between Babel and Vulcan and the search for missing ships in the Delphi sector. In 2269, the Zimbabwe herself disappeared in the region.
However, the crew of the USS Enterprise later discovered that the omnipotent being known as Trelane was responsible for the disappearances, and had miniaturized the Zimbabwe and placed her inside a glass bottle. Following the intervention of the Enterprise, the Zimbabwe and her crew were restored to normal. (TOS video game: Judgment Rites)
This article uses material from the "USS Zimbabwe (Constitution class)" article on the Memory-beta wiki at Wikia and is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike License.
Name: USS Zimbabwe
USS Zimbabwe was a Constitution-class heavy cruiser on active duty in Starfleet during the late 23rd century. (TOS computer game: Judgment Rites)
This article uses material from the "USS Zimbabwe (Constitution class)" article on the ST Expanded wiki at Wikia and is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike License.